ịgba ụlọ katọn Andreae nyo akwụkwọ agba agba njide nyo maka ịgba ụlọ ndò - China ịgba ụlọ ntu kaadiboodu Andreae nyo akwụkwọ agba njide nyo maka ịgba ụlọ ndozi Supplier, Factory –Shanghai Sffiltech Co., Ltd.
>lọ>ngwaahịa>Industrial Air purifier>Agba Myọcha
ịgba katọn kaadiboodu Andreae nyo akwụkwọ agba arrestor nyo maka ịgba ụlọ ndò
Media: ihe eji eme ka mmiri na-ekpuchi mmiri, kwa mita mita adsorption ikike iji ruo 15-25KG, nke bụ oge 3-5 karịa ihe ndị ọzọ.
Din53438 Nkwụ anaghị ere ọkụ: F1
Media: Kraft akwụkwọ + 5mm polyester
High nyo arụmọrụ, na ire ọkụ retardation, mgbochi static
V akọrọ ihe nzacha, makwaara dị ka mpempe akwụkwọ eserese, paint filter filter (mpịachi bọọdụ nzacha). A na-eji ya akpọnye ọnụ ụlọ ọgwụ ụdị nke ụdị ngwaahịa gburugburu ebe obibi na-eme ka ọ dị mma, ọ na-eji njikwa nchedo gburugburu ebe obibi; Ọ na-eme ka ịgba / agba gharazie ị moreụ mmiri, enweghị mmetọ! Nwere ike ịkpụcha ụcha, mmanụ, iko akụrụngwa, epoxy, tar, iron Christopher, mmanya nke ọrụ, plastik, seramiiki, nsị, eserese, potilain, wdg, mmetụta na-ekpocha ikuku ikuku dị elu dị ka 99.99%, elu ihe ndị ọzọ chọrọ ma ọ bụ ịgbanyeghị mmiri n'ọrụ ma ọ bụ iru mmiri ka ukwuu mgbe ị ka na-eji ya ka mma. Mpempe ahịhịa V na-amịkpọ nwere ike ịmịchapu ihe mkpuchi ahụ nke ọma, na-amanye ya site na ntụgharị mgbanwe ụgbọelu ruo ọtụtụ oge, yabụ nke ahụ dị arọ karịa ahụ ikuku ga-arapara na mpempe akwụkwọ, ọ bụghị pụọ na mmiri ahụ. Wepu ihe ndi ozo n’ime mpempe nzacha n’ogige atụrụ site na ndoju pere mpe, fesaa ruo mgbe ngwucha zuru oke, ndi nzacha choro igbanwe! 14 to 15 n'arọ n'ogwe dịkarịa ala, na-ebugharị ikike okpukpu atọ ruo ise nke ụdị akwụkwọ nzacha ndị ọzọ, na omimi nke ịmịpụta na elu ya.
Ogo: 10000mm + 1000mm + 60mm
Nrụpụta ihe nzacha: 90%
Ibu Ibu Mbu Mbu: 18KG / sqm
Ntuziaka na-atụ aro: 0.25-1 M / S
Oke nrụgide: 128-256pa
A na-eji ya mee ihe na agba agba maka osisi, arịa ụlọ, ụgbọala, ngwaike na ụlọ ndị ọzọ na agba wdg.
The ihe adabara nzacha siri ike ma ọ bụ mmiri mmiri ahụ n'oge spraying, ọ ga-n'ọtụtụ ebe na agba nyo maka osisi, ngwá ụlọ, ụgbọala, ngwaike, na ndị ọzọ na agba ụlọ wdg
Jikọrọ na-eke a dị ọcha ma dị ọhụrụ gburugburu ebe obibi maka ndị mmadụ, Sffiltech na-pụrụ iche na akọrọ ụdị ịgba nyo akwụkwọ. Dịka otu n'ime ndị nrụpụta na ngwa ahịa kacha mma, anyị nwere ike ịkwado gị ogo kacha mma na arụmọrụ kwụsiri ike nke ngwaahịa anyị. Biko obi sie gi ike izu.
Humidifier Wick Myọcha at Kwekọrọ n'Ozizi Nnọchi Humidifier Parts